မိုးကောင်းကင်: August 2012
ဆွမ်းလောင်းအသင်း ရာသက်ပန် ငွေပဒေသာပင်အတွက် ယနေ့အထိ လက်ခံရရှိထားသော အလှူရှင်များစာရင်း
အပတ်စဉ် တနလာင်္နေ့တိုင်း သံဃာအပါး (၃၀၀ )ကျော် အား အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းများ ဆက်ကပ် လောင်းလှူ လျှက်ရှိသော မေတ္တာရှင် ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ ၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်းသို့ မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) ဆရာတော်အရှင်ဇ၀န မှ ရာသက်ပန်ငွေပဒေသာပင် စိုက်ထူရန်အတွက် အလှူငွေ ၂,၀၀၀,၀၀၀ (ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ်)ကို မတည်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတကာမှ စေတနာရှင် အလှူရှင်များအနေဖြင့် မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်းသို့ ရာသက်ပန် ငွေပဒေသာပင်တစ်ခုလျှင် အလှူငွေ (၅၀၀၀၀ ကျပ်) ဖြင့် ပါဝင်လှူဒါန်း ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါကြောင်း နိဗ္ဗာန်အကျိုးဆော်၍ နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
သာသနာတည်ဘို့ ဆွမ်းလောင်းစို့ နေ့စဉ်အချိန်မှန် လောင်းလှူနိုင်ရန် တို့များကြိုးပမ်းရန်-
မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း ၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်းတစ်သက်တာထာဝရ ငွေပဒေသာပင်အတွက် အလှူရှင်များ-စာရင်းကို နောက်တိုး အလှူရှင်များစာရင်းနှင့်တကွ ဖော်ပြေပေးလိုက်ရပါသည်။
6.11.2012 update ပြုလုပ်ပြီး။
(လစဉ် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀)
၄.ကိုဇော်ဇော် နဲ့ ညီမ ခေတ်ရတနာ (စင်္ကာပူ)
(လစဉ် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀)
၁၂.သာသာယာယာ(မန္တလေး) (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၈.ကိုဖြိုးသွင်ကျော်၊မစီစီသောင်း၊မမွန်မွန်သန့်(မန္တလေးမြို့) (၁၁၀၀၀၀ ကျပ်)
၁၉. ကိုဇော်မင်းအောင် မိသားစု မင်းဘူးမြို့ (၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၂၀. ကိုဉာဏ်မျိုးထက် (UAE) + မယုယုဆွေ ၊ သား-သီဟစံ၊ သမီး-မဒ္ဒီမျိုးထက်၊ မြင်းမိုရ်ဦး မိသားစု မန္တလေးမြို့ (၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၂၁. မိဘနှစ်ပါးအားဦးထိပ်ထား၍ အမေရိကန်နိုင်ငံ (L.A) မြို့နေ မအိအိဆွေဇင်မှ (၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၂၂. ဦးရှိန်၊ ဒေါ်ခင်နီ ၊မောင်ကျော်ဇင်ဖြိုး တို့အားရည်စူးပြီး သမီးလေး အင်ကြင်းသူ မိသားစု '' (ရန်ကုန်) မှ
သမီးလေးအင်ကြင်းသူ 25-09-2012 မွေးနေ့အလှူအဖြစ် (၁၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၂၃. ကိုမောင်သက်+မဝေေ၀စိုး (မူဆယ်)မြို့မှ (၂၅၀၀၀၀ ကျပ်)
အလှူငွေစုစုပေါင်း= ၅,၀၄၇၃၁၇ ကျပ်
၆.ကိုမျိုးဦး+မခိုင်ခင်ဝင်း ၊သမီးလေး-သန့်အိနြေ္ဒဦး မိသားစု(စင်္ကာပူ) အလှူငွေ( ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၈.ကိုဇင်လင်းဇော် + မသက်မာ (စင်္ကာပူ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၁.မယွန်းရတီလှိုင် (နန်းထိုက်ဖုန်းအပိုပစ္စည်း နှင့်အရောင်းဆိုင် ၊ မလေးရှား) ( ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၂.ဦးကိုကိုနိုင် + ဒေါ်မြင့်သဲစုစံ + သားသား မောင်ဇွဲလုလင်နိုင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (၂၀၁,၂၀၀ကျပ်)
၅၇.ဦးစောလစ်ဝှီး@ဦးကျော်စိုးလင်း+ဒေါ်ကျင်အေး မိသားစု(ရန်ကုန်)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၅၈.ကွယ်လွန်သူ ဘဘ ဦးဘိုးအေး၊မယ်မယ် ဒေါ်ကျင်ရှီ ၊ ဖေဖေ ဦးသိန်းအောင်၊ မေမေ ဒေါ်ညွှန်စိန် နှင့် ဒေါ်လေး ဒေါ်သျှမ်းသွယ်နှင့် မောင်နှမများကို ရည်စူး၍ ကိုဌေးအောင်(ဒိန်းမတ်)၏ အလှူ။
၅၉.ဦးပြုံး+ဒေါ်သန်းတင် မိသားစု (၆၀,၅၀၀ ကျပ်)
၆၀.ဦးကျော်မြင့်+ဒေါ်စန်းရီ မိသားစု(၃၀,၂၅၀ ကျပ်)
၆၁.Dr.မျိုးမင်းသန့်+မမေယမင်းသူ(MD, Bright Team Decoration Co. Ltd. ရန်ကုန်)(၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၆၂.ဦးစိုးဝင်း+ဒေါ်ခင်နှင်းအေး၊သား OSCAR (USA)(၅၀၀,၀၀ ကျပ်)
၆၃.ဦးပန်းစိန်+ဒေါ်မြသိန်း မိသားစု (၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၆၄.(၂၀.၉.၂၀၁၁)နေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားသော မိခင်ကြီး ဒေါ်စိန်ကျော့ အားရည်စူး၍ ဦးလှသိန်း+ဒေါ်အေးအေးမြင့် မိသားစု ( ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၆၅.ဦးသိန်းဟန်+(ဒေါ်စန်းရီ)ရည်စူးပြီး..ကိုကြီးစတိုး(နီလိုင်း)မိသားစု (မလေးရှား) ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၆၆.ကိုဇေယျဝင်း+မခိုင်ဇင်ထွန်း(သြစတေးလျ) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
၆၇.Mr.Koyanagi + မသင်းသင်းနိုင် ၊သား HIROAKI မိသားစု (ဂျပန်) ( ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၆၈.ကိုဆန်းမော်+မအေးမွန်ထွန်း(ဂျပန်) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၆၉.နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှူးထား၍ ကိုကြည်ဇော်သက်+မရွှန်းလဲ့မေ (စင်ကာပူ)- ၆၁၈၀၀ ကျပ်
၇၁.ကွယ်လွန်သူ ဦးမင်းနိုင် အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကြူကြူခင်မိသားစု(ရန်ကုန်) ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၇၂.ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးအေး+ဒေါ်စန်းစန်းလွင် တို့အားရည်စူး၍ ကိုအောင်ပြည့်စုံအေး(စင်္ကာပူ) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်+၅၀,၄၂၄ ကျပ်
၇၃.ကိုစောကိုဦး+မမိုးဝေကျော်(စင်္ကာပူ) ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၇၄.ကိုမြတ်ထွန်းမျိုး+မအိချို (စင်္ကာပူ)( ၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၇၅.ကွယ်လွန်သူ အဖိုး အဖွားများအားရည်စူး၍ Mr.Lee Chia Meng+ မနှင်းဥမ္မာနိုင် (ရန်ကုန်) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၇၆.ကိုဘိုဘိုဟန်+မရတနာတင် (စင်္ကာပူ) (80 SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၇၇.ဦးကိုကိုမောင် + Dr.ဇာခြည်လဲ့ ၊သမီး-ဆုပြည်ရွှေစင်၊ဆုလဲ့ရွှေစင် မိသားစု(ရန်ကုန်) (၂၀,၀၀၀ ကျပ်)
၇၈.မအေးမို့မို့ကြည် (စင်္ကာပူ) (80 SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၇၉.နှစ်ဖက်သော မိဘများကို အမှူးထား၍
ကိုအောင်ခိုင်ကျော်+မအေးမြတ်မြတ်စိုး(စင်္ကာပူ) မှ ကိုအောင်ခိုင်ကျော် ၏ (၂၂.၂.၂၀၁၂) မွေးနေ့အလှူ
၈၀.ကွယ်လွန်သူများဖြစ်ကြသော ဦးသန်း+ဒေါ်အမာ၊ဦးထွန်းကြည်+ဒေါ်အုန်းမြိုင်၊ဦးသန်းတင်+ဒေါ်သန်းနွဲ့ တို့အား ရည်စူး၍ ဦးဌေးလွင်+ဒေါ်ဒန်းမြိုင်မိသားစု၏ အလှူ (၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၈၁.ကိုသီဟသက်တင်+မဇာခြည်လွင် ၊သား-ဂျေဂျေ(စင်္ကာပူ) မိသားစု မှ (၂၅.၂.၂၀၁၂)ကိုသီဟသက်တင် ၏ မွေးနေ့အလှူ (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၈၂.ကိုဇော်မင်းလှိုင်+မသဇင်မြင့် ၊သမီး-သီရိဇော် (စင်္ကာပူ)မှ (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၈၃.မအေးအေးသွယ် (ဆိုက်ပရပ်စ်) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၈၄.ဦးစိန်ဝင်း+ဒေါ်နုနုရီ မိသားစု (80 SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၈၅.ကိုမောင်မောင်မျိုးမင်း+မမိုးသူဇာ ၊သမီး-စုနေခြည်မောင်၊စုစံထားမောင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80 SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၈၆.ကိုမျိုးမင်းကြည် +မဇင်မာဝင်း ၊သား- ရှင်းခန့်မင်းကြည် ၊ပိုင်ဇင်မင်းကြည် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80 SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၈၇.ကိုဇော်ဝင်းမြင့် + မတင်ဇာပိုင် မိသားစု (250 SGD)(၁၆၀,၀၀၀ ကျပ်)
၈၈.ဦးခင်အောင်တင် + ဒေါ်ခင်ခင်ဦး မိသားစု(စင်္ကာပူ)မှ ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီး(၉)နှစ်ပြည့်အားရည်စူးအလှူ (၅၀၀၀၀ ကျပ်)
၈၉.ဦးအောင်သိမ်း+ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး မိသားစု (စင်္ကာပူ) (100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၉၀.ကိုရန်နိုင်+မသီတာ (စင်္ကာပူ) (240 SGD)(၁၅၃၆၀၀ ကျပ် )
၉၁.ဦးအောင်ရှိန်+ ဒေါ်မငယ် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80 SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၉၂.ကိုစည်သူဝင်း+ မအိမွန်ချို (စင်္ကာပူ)မှ (100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၉၃.ကိုဝင်းထွဋ်အောင်+ဒေါ်သဉ္ဇာဝင်း ၊သား-ဘုန်းပြည့်စည်သူ မိသားစု(စင်္ကာပူ) (80 SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၉၄.မဇာခြည်မင်းမင်းထွေး(စင်္ကာပူ) (80 SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၉၅.Jesse Kaung Myat (Singapore) (200SGD)(၁၂၈,၀၀၀ ကျပ်)
၉၆.မသီသီဟန်နှင့် သူငယ်ချင်းများ (စင်္ကာပူ) (385SGD)(၂၄၆၄၀၀ ကျပ်)
၉၇.ကိုသိန်းဝင်းထွန်း + မအိအိထွန်း မိသားစု (စင်္ကာပူ) (500SGD)(၃၂၀,၀၀၀ ကျပ်)
၉၈.ကိုဇော်ဝင်းထွဋ် + မနှင်းယုယုဝင်း၊သမီး-အေးချမ်းပွင့်ဖြူ မိသားစု(စင်္ကာပူ) (100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၉၉.ကိုဇော်ဇော်ထွန်း+ မခိုင်သဉ္ဖာဝင်း ၊သား- ကျော်ဇေယျာဝင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ) (100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၁၀၀.ကိုမျိုးမင်း +မနှင်းဖြူဖြူ ၊သား- မိုးသစ်မင်း မိသားစု (စင်္ကာပူ)(100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၁၀၁.ကိုကျော်မင်း +မနီလာလှိုင် ၊သမီး- မေမျိုးဟိန်း၊မေမျိုးဟန် မိသားစု(စင်္ကာပူ) (100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၁၀၂.ကိုစိုးဝင်းနောင် + မသန္တာလှိုင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၁၀၃.ရွှေအင်းလေးမိသားစု(၁၅၃၆၀၀ ကျပ် )
၁၀၄.ကိုထိန်လင်း+ မမေသင်္ကြန်ထွန်း (စင်္ကာပူ)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၁၀၅.မနီနီလွင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၁၀၆.မိခင်ဒေါ်စောလေးအား အမှူးထား၍ သမီး မမူမူအေး မိသားစု (စင်္ကာပူ)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၁၀၇.ဦးတင့်လွင်မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၁၀၈.ဦးခိုင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၁၀၉.ဦးအောင်ကိုမြင့် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၁၁၀.မိခင် ဒေါ်ခင်စိန်အား အမှူးထား၍ ဒေါ်တင်မြင့်မိသားစု (စင်္ကာပူ)(80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၁၁၁.မိခင်ဒေါ်အောင်ကြွဖြူ(စစ်တွေ)အား အမှူးထား၍ သမီး- လှလှကြည်၊ဒေါက်တာမြင့်မြင့်သိန်း မိသားစု (စင်္ကာပူ) (300 SGD)(၁၉၂,၀၀၀ ကျပ်)
၁၁၂.ကိုကျော်စွာလင်း+ မကေခိုင် မိသားစု(စင်္ကာပူ) (100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၁၁၃.ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးအား အမှူးထား၍ Miss Sharon နှင့်မောင်နှမမိသားစုများ (စင်္ကာပူ) (80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၁၁၄.ဦးသန်းထိုက်ဦး +ဒေါ်ကြူကြူဝင်း မိသားစု (စင်္ကာပူ)(80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၁၁၅.မယုယုဟန်မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၁၁၆.ဦးသိန်းဝင်း+ဒေါ်နီနီအေးမိသားစု (စင်္ကာပူ) (170SGD)(၁၀၈,၈၀၀ကျပ်)
၁၁၇.မမြရည်ညို မိသားစု (စင်္ကာပူ) (90SGD)(၅၇,၆၀၀ ကျပ်)
၁၁၈.ဦးသက်တင်+ဒေါ်သန်းမြင့် မိသားစု (Best Smile -စင်္ကာပူ) (90SGD)(၅၇,၆၀၀ ကျပ်)
၁၁၉.ဦးကျော်တင့် + ဒေါ်အုန်းကြည် ၊သမီး -မချယ်ရီ မိသားစု (စင်္ကာပူ)(110SGD)(၇၀,၄၀၀ ကျပ်)
၁၂၀.ဦးကျော်ခိုင်တင့် + ဒေါ်သိန်းသိန်းရှင်မိသားစု (စင်္ကာပူ)(80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၁၂၁.ဒေါ်အေးသန့် မိသားစု (စင်္ကာပူ)(100SGD)(၆၄,၀၀၀ကျပ်)
၁၂၂.ဦးစိုးလှ +ဒေါ်အေးမြတ်မွန် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (100SGD)(၆၄,၀၀၀ကျပ်)
၁၂၃.ဦးအောင်စိုး+ဒေါ်ခင်ထားအေး မိသားစု (စင်္ကာပူ)(100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၁၂၄.ဦးစိုးမိုးအောင်+ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့် ၊သမီး- အေးမြတ်စိုး မိသားစု(100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၁၂၅.ဦးအောင်ဇော်လင်းမိသားစု (စင်္ကာပူ) (100 SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၁၂၆.ဦးအေးကျော်+ဒေါ်နွယ်လေးခိုင် တို့အား အမှူးထား၍ မအေးသက်ထားနွယ်(စင်္ကာပူ) (100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၁၂၇.ဦးစိုးဝင်း+ဒေါ်ခင်မာထွေး မိသားစု (စင်္ကာပူ) (90SGD)(၅၇,၆၀၀ ကျပ်)
၁၂၈.နှစ်ဖက်သော မိဘများဖြစ်သောဦးစိုးလှိုင်+ဒေါ်မြသိန်း၊ဦးလိန်ဟာ+ဒေါ်ရာဟတ် တို့အားအမှူးထား၍
ကိုကျော်ပိုင် +မသင်းသင်းအေး မိသားစု (စင်္ကာပူ) (100USD) (၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၁၂၉.ကိုဝင်းမင်း +မကျော့ကေခိုင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၁၃၀.ဦးမြစိန်+ဒေါ်လှမြင့် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၁၃၁.မစုမွန် ၊ မဌေးဌေးလင်း ကောင်းမှူး (စင်္ကာပူ)(80SGD)(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၁၃၂.ကွယ်လွန်သူ ဦးလှသောင်း အားရည်စူးပြီး ဒေါ်စံပယ်အား အမှူးထား၍မသန်းသန်းဆင့် ၏အလှူ။ (စင်္ကာပူ)
၁၃၃.ကွယ်လွန်သူအဖွား ဒေါ်သိန်းညွန့် အားရည်စူး၍ ဦးညွန့်ရွှေ+ဒေါ်အမြိုင် ၊သမီး- မလှိုင်ဝင်းလဲ့ (စင်္ကာပူ)မှ (၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၁၃၄.ဦးကျော်ဝင်း + ဒေါ်မာလာရီ (စင်္ကာပူ)မှ(100SGD)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၁၃၅.ဦးဝင်းထိန် + မမေကျော်စိုးညွန့် (စင်္ကာပူ)(500SGD)(၃၂၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၃၆.ဦးသိန်းရွှေ + ဒေါ်စန်းစန်းမိသားစု (စင်္ကာပူ) စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၈၀(၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၁၃၇.ဦးလှသောင်း+ဒေါ်စံပယ် ၊သမီး- မသန်းသန်းတင့် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (၅၁,၂၀၀ ကျပ်)
၁၃၈.ဦးအောင်စိုးမြင့် + ဒေါ်သောင်းရီတို့အား အမှူးထား၍သားသမီးများကောင်းမှူး (စင်္ကာပူ) စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀၀(၃၂၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၃၉.ဦးအောင်ဇော်+ဒေါ်တင်တင်ခိုင် (စင်္ကာပူ) ( 100USD) (၈၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၄၀.ကိုစိုးမိုးမြိုင် +မနီလာသန်းထွန်း (စင်္ကာပူ) (၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၁၄၁.ကိုဇော်လင်းအောင် +မဇင်မာထွန်း (စင်္ကာပူ)(၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၁၄၂.ဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်း (လစဉ် စင်္ကာပူဒေါ်လာ၁၀ x ၅ နှစ်အတွက်) (၃၈၄,၀၀၀ ကျပ်)
၁၄၃.ဦးသန်းဆွေ +ဒေါ်သင်းသင်းလှိုင် ၊သား-ကျော်မျိုးဆွေ၊ဇော်မျိုးဆွေ၊စိုးမိုးဆွေမိသားစု (စင်္ကာပူ) ၁၀၂,၄၀၀ ကျပ်
၁၄၄.ဦးဇော်ဝင်း+ဒေါ်စီစီ မိသားစု (စင်္ကာပူ) ၁၀၂,၄၀၀ ကျပ်
၁၄၅.ဦးထွန်းညွန့်+ဒေါ်ဌေးဌေးကြည်၊သား-မင်းနိုင်ဦး၊သမီး-စုစုအောင် မိသားစု(စင်္ကာပူ) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
၁၄၆.ကိုကျော်သူရ + မစိုးစိုးလွင် ( U.S.A) (၈၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၄၇.ကွယ်လွန်သူ ဦးဝင်းလွင် (ခ) ဦးရေခဲ အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစုကောင်းမှူး။(ကျောက်မြောင်း)
၁၄၈.ကိုကျော်စွာမင်း (လွိုက်ကော်) (၁၅.၄.၂၀၁၂မွေးနေ့အလှူ)(၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၄၉.ကိုမင်းသူရိန်+မလဲ့ရည်ဝင်း၊သား-မင်းပြည့်ဖြိုး မိသားစု(စင်္ကာပူ) (၆၄,၀၀၀ ကျပ်)
၁၅၀.ဦးအောင်ဌေး+ဒေါ်မြတ်နွယ် ၊သမီး-မမြတ်မျိုးအောင် မိသားစု(စင်္ကာပူ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)(yoma)
၁၅၃.ကိုရဲမျိုးကျော်+Dr.နန်းထွေးခမ်း(စင်္ကာပူ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၅၄.ကိုမျိုးဝဏ္ဏဦး(ရန်ကုန်) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၅၅.ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်အောင်မာဝေ(၁)နှစ်ပြည့်အား ရည်စူး၍ ဦးထွန်းအောင်ကျော်+ဒေါ်ခင်မာလာဝေ၊သမီး-ရွှန်းမြတ်ဆုလာဘ် မိသားစု၏အလှူ (၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၅၆.Kathy Gems Art မိသားစု(Abu Dhabi, UAE) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
၁၅၇.ကိုစိုးနိုင်ဝင်း+မလဲ့လဲ့နှင်း(ရွှေဘို) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၅၈.ဦးအောင်ကိုသန့်+မနှင်းအိခိုင်(စင်္ကာပူ) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၅၉.ဦးထွန်းနောင်+ဒေါ်ခင်လေးဆွေ မိသားစု(စင်္ကာပူ)( ၆၅,၃၀၀ ကျပ်)
၁၆၀.ဦးကျော်ဦး+ဒေါ်ချယ်ရီမြင့်၊သမီး-နှင်းရည်ဝင်း ၊သား-ဟိန်းသူရဇော်၏ (၆၊၄၊၂၀၁၂)(၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ (စင်္ကာပူ)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၆၁.ကိုသိန်းဝင်း+မမြတ်မြတ်စန်း (စင်္ကာပူ)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၆၂.ကွယ်လွန်သူသမီးလေး မယ်မဒီဘို အားရည်စူး၍ ကိုဇင်ဘိုဘိုစိုး+မဒါလီမြင့်ဆွေမိသားစု (စင်္ကာပူ)(၆၅,၀၀၀ ကျပ်)
၁၆၃.မစုငယ်ဝင်း (စင်္ကာပူ)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၆၄.ဦးကျော်ခိုင်+ဒေါ်ခင်ဝင်းသန့် (၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၆၅.ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး ဦးအေးသောင်းအားရည်စူး၍ ဒေါ်အေးမြင့်(ကွမ်းခြံကုန်း) မိသားစု (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၆၆.ကိုလင်းလင်းထွန်း+မရွှေဇင်မာ၊သမီးလေး-ဖြူစင်မင်း မိသားစု(၂၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၆၇.ဦးမျိုးဝင်း+ဒေါ်ခင်ခင်ကြူမိသားစု(မြိတ်) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
၁၆၈.ဦးခက်ဂွမ်+ဒေါ်အင်ကြူမိသားစု(မြိတ်) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
၁၆၉.ကိုမျိုးမင်းသိန်း+မဖြိုးမင်းဦး(စင်္ကာပူ) (၆၅,၀၀၀ ကျပ်)
သားလေး-လင်းသန့်ပိုင်၏ ၃ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ(၃၀.၄.၂၀၁၂) S$(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၁၇၁.ဖြူစင်သဒ္ဓါအဖွဲ့(စင်္ကာပူ) (၁၈၅,၀၀၀ ကျပ်)
၁၇၂.ကိုမြင့်ဇော်+မအေးသန္တာမင်း၊သား-မင်းသုတဇော် မိသားစု(စင်္ကာပူ)မှ မအေးသန္တာမင်းမွေးနေ့အလှူ (၆၅,၀၀၀ ကျပ်)
၁၇၃.ကိုမျိုးသန့်စိုး+မအေးသန္တာဖြိုး(စင်္ကာပူ) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
၁၇၄.ဦးစိန်ဘောဂ+ဒေါ်နီနီထွန်း မိသားစု(စင်္ကာပူ) ၆၅,၀၀၀ ကျပ်
၁၇၅.မအေးမြတ်သူ (စင်္ကာပူ) ၆၅,၀၀၀ ကျပ်
၁၇၆.မနွယ်နီကျော် (စင်္ကာပူ) ၃၂,၅၀၀ ကျပ်
၁၇၇.မမြမြင်ကြည် မိသားစု (စင်္ကာပူ) ၇၁,၅၀၀ ကျပ်
၁၇၈.မအေးစုခိုင် (စင်္ကာပူ) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
ရာသက်ပန်ဆွမ်းပဒေသာပင်(၈)ခုအတွက် အလှူငွေ (၄၀,၀၀၀ ယန်း)
၁၈၀.ကိုကုဋေဖြိုးအောင် + မကေခိုင်ချို မိသားစု (ဂျပန်နိုင်ငံ) မှ ရာသက်ပန်ဆွမ်းပဒေသာပင် ၂ခုအတွက် အလှူငွေ (၁၀,၀၀၀ ယန်း)(YN)
၁၈၁.ကွယ်လွန်သူများဖြစ်ကြသော ဒေါ်တင်သန်း၊ဒေါ်စုစုကျော်တို့အား ရည်စူး၍ ဦးသန်းစိန်နှင့် သမီး-ဒေါ်ဆွေဇင်သန်းစိန်၊ဒေါ်မေဇင်သန်းစိန် (စင်္ကာပူ)မှ အလှူငွေ ၂၀၀,၀၀၀ကျပ်
၁၈၂.ဦးသန်းလွင်ဦး+ဒေါ်ခင်ဌေးလှစိုး မိသားစု (၆၅,၀၀၀ကျပ်)
၁၈၄.ဦးတင်ထူး+ဒေါ်စန်းစန်းဦး၊သား-မောင်မျိုးခင်၊မောင်ဝေဖြိုး မိသားစု(စင်္ကာပူ) ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁၈၅.ကိုဇော်သန့်အောင်(မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း ၊စင်္ကာပူ) (၅၁,၈၇၀ ကျပ်)(22/6)
၁၈၆.ကိုအောင်ကျော်မိုး+မဇင်ဌေးဦး၊ သမီး-အေးခိုင်ခိုင်ကျော် မိသားစု(စင်္ကာပူ)(၁၀၃,၇၄၀ ကျပ်)(22/6)
၁၈၇.ကိုထင်အောင်စိုး+မလဲ့လဲ့ဝင်း(စင်္ကာပူ)(၃၉၉,၀၀၀ ကျပ်) (22/6)
၁၈၈.ကိုနိုင်မင်းသန်း+မယမင်းသန့် မိသားစု(ဂျပန်) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
၁၈၉.ဂျပန်ရောက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့ ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
၁၉၀.ကိုဖြိုးကြိုင် + မခင်မာချို ၊သား-မြတ်ဟိန်းစံ၊သမီး-မေမျက်ချယ် မိသားစု(ဆင်မင်းလမ်း၊အလုံ) ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁၉၁.ကိုလှမိုးဦးဆောင်သော ဆစ်ဒနီအလှူရှင်များအဖွဲ့ (ဆစ်ဒနီမြို့) ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်
၁၉၂.နှစ်ဖက်မိဘများကို အမှူးထား၍ ဦးသန်းလွင်+ဒေါ်လှလှယဉ် မိသားစု(စင်္ကာပူ)(၃၃,၂၅၀ ကျပ်)(22/6)
၁၉၃.ဦးဝင်းဖေမိသားစု(စင်္ကာပူ) (၃၃,၂၅၀ ကျပ်)(22/6)
၁၉၄.ဦးအောင်သန်း+ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့်တို့အား အမှူးထား၍ ကိုသိန်းမင်း+မအိအိအောင်(ရန်ကုန်) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)(30/5)
၁၉၅.မသက်နန္ဒာ (U.S.A) (၁၀၅,၀၇၅ ကျပ်) (22/6)
၁၉၆.မအေးသီတာ (စင်္ကာပူ) (၅၃,၂၀၀ ကျပ်) (22/6)
၁၉၇.မအေးမြကြူမိသားစု (ထိုင်ဝမ်) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်(2/6)
၁၉၈.ဦးချင်းစိန် +ဒေါ်ခင်မြင့်ရီ မိသားစု (ထိုင်ဝမ်) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်(2/6)
၁၉၉.ဦးစိန်ဝင်း+ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် မိသားစု (ထိုင်ဝမ်) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်(2/6)
၂၀၀.ဦးအောင်ထွန်း+ဒေါ်နွယ်နီစိန် ၊သား-မောင်ဥက္ကာကျော်(ထိုင်ဝမ်) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်(2/6)
၂၀၁.မနန်းဇာခြည်လတ်(စင်္ကာပူ)(၆၆,၅၀၀ ကျပ်) (22/6)
၂၀၂.ဦးအောင်ထွန်းလှိုင်+ဒေါ်စံအောင်ခိုင် တို့အားအမှူးထား၍ သမီး-မနွယ်နွယ်သိန်း(စင်္ကာပူ)(၆၆,၅၀၀ ကျပ်) (22/6)
၂၀၃.ကိုထွန်းမြင့်အောင်+မဆုဝေဖြိုး(စင်္ကာပူ)(၅၁၈၇၀ ကျပ်) (22/6)
၂၀၆.မတင်နန္ဒာထွန်း(စင်္ကာပူ) (၅၃,၂၀၀ကျပ်) (22/6)
၂၀၈.ဇွန်လ မေတ္တာရှင်ဆရာတော်တရားပွဲမှ ရရှိသော ရာသက်ပန်ဆွမ်းအလှူငွေစုစုပေါင်း(S$1958အတွက်) ၁,၂၇၂,၇၀၀ ကျပ်(12/6)
၂၀၉.ဒေါ်မေစုကောင်း မိသားစု(ရန်ကုန်) ၂၀,၀၀၀ ကျပ် (22/6)
၂၁၀..ကွယ်လွန်သူဦးလေး ဦးစံမောင်အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ တူ၊တူမများ၏ အလှူ (150 SGDx 678 Kyats=101700 Kyats) (5/7)
၂၁၁.ဦးကျော်နိုင်+ဒေါ်တင်အောင်မိသားစု(တောင်ဥက္ကလာ)(80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)
၂၁၂.ဦးမောင်ငယ်+ဒေါ်မူမူအောင်၊သမီး-နီလာအေး မိသားစု(စင်္ကာပူ)(80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)
၂၁၃.ကိုခိုင်မင်းဇော်+မခင်နီလာထွန်း၊သမီး-ကြယ်စင်ခိုင်မင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)
၂၁၄.မအေးမြသီတာလွင်(စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)
၂၁၅.ကိုလင်းနိုင်+မစုစုဖြိုး၊သား-မောင်ဥာဏ်ဟိန်းထက် မိသားစု(စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)
၂၁၆.ကိုလင်း(စင်္ကာပူ) (50SGDx 678 Kyats=33900 Kyats) (5/7)
၂၁၇.ကိုသန့်ဇော်+မသိန်းသိန်းမော်၊သား-လွင်သန့်မောင်၊သမီး-နှင်းသန့်သော်တာ မိသားစု(စင်္ကာပူ)မှ(၇နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာ အထိမ်းအမှတ်အလှူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)
၂၁၈.ကိုစည်သူသိန်း+မမိုးသန္တာဝင်း၊သမီး-ယွန်းအလိမ္မာမိုး မိသားစု(စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)
၂၁၉.မမြသဲဖြူ+ မလဲ့လဲ့ခိုင်(စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)
၂၂၀.ဦးသိန်းဌေး+ဒေါ်ရှုတင်မိသားစု(စင်္ကာပူ)(စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)
၂၂၁.ကိုဝိမုတ္တိသုခ (စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)
၂၂၂.ကိုကျော်စိုးမိုး+မယုဇနထွန်း (စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)
၂၂၃.မသိမ့်သိမ့်မျိုး (စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)
၂၂၄.ကိုတင်အောင်ထွန်း(စင်္ကာပူ) (50 SGDx 678 Kyats=33900 Kyats) (5/7)
၂၂၅.ကိုစံထွန်း(စင်္ကာပူ) (100SGDx 678 Kyats=67800 Kyats) (5/7)
၂၂၆.မအိအိမွန် (စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats)
၂၂၇.ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီး ဒေါ်မြ၀င်းအားရည်စူး၍ သမီး-ဇာခြည်မင်းမင်းထွေး (စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)
၂၂၈.ဦးမြင့်သိမ်း+(ဒေါ်လှသိမ်း) မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)
၂၂၉.ကိုဌေးဝင်း+ မမျိုးသီရိသိမ်း မိသားစု (စင်္ကာပူ) (80SGDx 678 Kyats=54240 Kyats) (5/7)
၂၃၀.ဦးမောင်မောင်သန်း+ဒေါ်ဥမ္မာဟိန်း၊သား-မောင်ဥဂ္ဂါမင်း မိသားစု(ပါရမီ၊ရန်ကုန်) ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် (8/7)
၂၃၁.Dr.ဒေါ်ခင်အေးမူ+ဒေါ်မိမိတင်မိသားစု(ရန်ကုန်) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်(14/7)
၂၃၂.မ၀ဿန်ဦး(စင်္ကာပူ) ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် (18/7)
၂၂၄.ဦးခင်မောင်+ဒေါ်ရင်မေမိသားစု- ၅၀,၀၀၀ ကျပ်(24/7)
၂၂၅.ဦးသိန်း+ဒေါ်ကြင်အေး မိသားစု - ၁၀၀၀၀ ကျပ် (24/7)
၂၂၆.မစုမော်ဝင်းသော်(အင်းစိန်) ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် (27/7)
၂၂၇.ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးမွန်ထွန်းရင် နှင့် မိခင်ကြီး ဒေါ်ငွေကျင်အား ရည်စူး၍ သား-ကိုမွန်မောင်အေး+မမြင့်မြင့်ဆွေ မိသားစု(၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)
၂၂၈.မမိုးမခမေ၏ ဖခင် ဦးကြည်စိုး၏(၆၃နှစ်ပြည့်)မွေးနေ့အလှူ (၅၀,၀၀၀ ကျပ်) (၂၉.၈.၂၀၁၂မွေးနေ့)
၂၂၉.ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ခမည်းတော်ကြီးဦးကျော်လှိုင်+မယ်တော်ကြီးဒေါ်ပွဲရင် တို့အားရည်စူး၍ အရှင်ဇနက(အဂါင်္မောင်) သန္တိသုခကျောင်း(လန်ဒန်တက္ကသိုလ်) ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၂၃၀.ကွယ်လွန်သူသမီးလေးမယ်မဒီဘို(၄)လပြည့်အား ရည်စူး၍ ကိုဇင်ဘိုဘိုစိုး+မဒါလီမြင့်ဆွေ(စင်္ကာပူ) (100 SGDx687)(၆၈၇၀၀ ကျပ်) (30/7)
၂၃၁.ဦးထွန်းအောင်ကျော်+ဒေါ်ခင်မာလာဝေ၊သမီး-ရွှန်းမြတ်ဆုလာဘ် မိသားစု(စင်္ကာပူ)မှ ဒေါ်ခင်မာလာဝေ၏(၂၇.၇.၂၀၁၂) မွေးနေ့အလှူ။
(150 SGDx687) (၁၀၃၀၅၀ ကျပ်)(30/7)
၂၃၂.မတင်တင်အောင်(စင်္ကာပူ)(200 SGDx687)(၁၃၇၄၀၀ ကျပ်)(30/7)
၂၃၆.ကိုရန်နိုင်ချစ် + မသိန်းသိန်းဝင်း ၊ သမီးဦး တာရာလင်းလက်အောင် မိသားစု (စင်ကာပူ) (၁၉.၈.၂၀၁၂) မွေးနေ့အလှူ (၅၀၀၀၀ ကျပ်)
စုစုပေါင်း =၂၃,၂၂၀,၅၂၆ ကျပ် (၁၄/၈/၂၀၁၂)
၂၃၇.ဦးအေးသန်း+ဒေါ်လှကြိုင်မိသားစု(စင်္ကာပူ) (၁၀၀၀၀၀ ကျပ်)(15/8)
၂၃၈.ဦးအေးကျော်+ဒေါ်သန်းသန်းဦး မိသားစု(စင်္ကာပူ)(၁၀၀၀၀၀ ကျပ်)(15/8)
၂၃၉.ကိုမြင့်အောင်+မသီတာအောင်၊သား-ရဲရင့်ဘုန်းမြင့်မိသားစု(စင်္ကာပူ) (၆၈၈၀၀ ကျပ်)(15/8)
၂၄၀.ကိုသန်းဇော်ဦး+မသီတာစိုး မိသားစု(စင်္ကာပူ) (၁၀၀၀၀၀ ကျပ်)(15/8)
၂၄၂.ကိုကျော်ဇေယျ+မဇင်သူထက်(ဂျပန်)မှ ကိုကျော်ဇေယျ၏မွေးနေ့အလှူ ( ၅၀,၀၀၀ ကျပ်)(24/8)
၂၄၃.မနီနီဝင်း(တိုကျို) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်) (24/8)
၂၄၄.ကိုစိုးထိုက်+မမာမာထွေး(စင်္ကာပူ)တို့၏ ၁၂ နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် အလှူ (၅၀,၀၀၀ ကျပ်) (25/8)
၂၄၆.ကိုမြင့်ဌေး+မတင်ဇာနီကျော်(စင်္ကာပူ)မှ မတင်ဇာနီကျော်၏ မွေးနေ့အလှူ ( ၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၂၄၇.ဦးစိုးဝင်း+ဒေါ်ခင်မျိုးသက် မိသားစု(လွှမ်းမိုးသူ ကုပ္မဏီလိမိတက်) (၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်)(6/9)
၂၄၈.ကိုဇေယျာနိုင်+မဇင်မာလတ်၊သမီး-မမေမြင့်မြတ်သွေးမိသားစု(ရန်ကုန်) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်) (KBZ)
၂၄၉.မအေးနန္ဒာကျော်(တိုကျို) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)(10/9)
၂၅၀.မဇင်မြတ်စိုး(တိုကျို) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)(10/9)
၂၅၂.ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး ဦးကြည်ဟုတ် နှင့် မိခင် ဒေါ်သန်းထွန်းတို့အား အမှူးထား၍ သမီး-မမျိုးနေဇာ(ရန်ကုန်)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၂၅၃.ကိုသန်းထိုက်စိုး(ဂျပန်) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
(ရန်ကုန်) (၅၀,၀၀၀ ကျပ်)
၂၅၈.မိခင်ဒေါ်တင်တင်ထွေး၏ မွေးနေ့အလှူအဖြစ် မပန်းမြတ်မြတ်+မအေးမြတ်သီတာအောင် (စင်္ကာပူ)
၂၅၉.မသဉ္ဇာမျိုးမြင့် (စင်္ကာပူ)(၃၃,၇၅၀ ကျပ်)(5/10)
ဒေါ်ကြည်ကြည်ဆွေမိသားစု (စင်္ကာပူ)(၅၀,၀၀၀ ကျပ်) (5/10)
၂၆၁.မိခင်ဒေါ်တင်တင်ချစ်အားအမှူးထား၍ သား-ကိုထိန်လင်းအောင်(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ
၂၆၃.ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ဦးမြင့်အောင်အားရည်စူးပြီး သမီးမဖြူလေး မိသားစု(မလေးရှား)(၅၄,၀၀၀ ကျပ်)(14/10 )
၂၆၄.ကိုတိုးလေး(ထိုင်း) ၅၃,၀၀၀ ကျပ် (25/10)
၂၆၅.မယမင်းဦး(စင်္ကာပူ)(၆၈၅၀၀ ကျပ်) (3/11)
၂၆၆.ဖခင်ကြီး ဦးထွန်းအောင်ကျော်အား အမှူးထား၍ ဦးကိုကိုနှင့် မောင်နှမတစ်စု (၅၁၃၇၅ ကျပ်)(3/11)
စုစုပေါင်း =၂၅,၄၁၇,၇၅၃ ကျပ် (၆/၁၁/၂၀၁၂)
မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း၊ ရာသက်ပန် ထာဝရငွေပဒေသာပင်အတွက် ပါဝင်လှူဒါန်းထားကြသော အလှူရှင်များ အနေဖြင့် အလှူများစာရင်းတွင် မပါဝင်ပါက ကိုဇော်မြင့် 0991041540 နှင့် ဒေါ်ဝါဝါခိုင်မင်း 0973095851 သို့ ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါတယ်။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 11:10 AM0comments Links to this post
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 12:50 AM 1 comments Links to this post